महिना दिनमै पायल्स रोगबाट छुटकारा पाउन खानुहोस् मुला ! – Krazy NepaL
March 12, 2021 3911
एजेन्सी । पाइल्स एउटा यस्तो रोग हो, जसमा मलद्वारमा पीडा र जलन महशुस हुने गर्दछ । पाइल्सका रोगीका साथ सबैभन्दा ठुलो समस्या यस विषयमा डाक्टरलाई बताउनु हो ।
हामी मुला काचै या पकाएर खाने गर्दछौँ । के तपाईलाई थाहा छ ? पाइल्स रोकथामका लागि मुला सबैभन्दा अचुक ओखती साबित भएको छ । मुलाको नियमित सेवनबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या केही महिनामै समाधान हुन्छ । मुलाको नियमित सेवनबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या छ भने त्यो समस्या बढ्न पाँउदैन ।
पाइल्स रोगीका लागि काँचो मुला सेवन गर्नु अति लाभदायिक हुन्छ । तपाई चाहनु हुन्छ भने यसलाई पिँधेर पनि सेवन गर्न सक्नु हुन्छ । अझ तपाई मुलाको रस निकालेर पनि पिउन सक्नु हुन्छ । मुलाको रस सेवन गर्दा भने एकपटक चिकित्सकको सल्लाह आवश्य लिनुस् । तपाई मुलाको प्रयोग संक्रमित स्थानमा जलन शान्त पार्न लगाउन पनि सक्नु हुन्छ । अहिले त बजारमा मुलाको पाउडर पनि सहजै पाइन्छ । अझ तपाई मुलाको रस निकालेर पनि पिउन सक्नु हुन्छ । मुलाको रस सेवन गर्दा भने एकपटक चिकित्सकको सल्लाह आवश्य लिनुस् ।
तपाई मुलाको प्रयोग संक्रमित स्थानमा जलन शान्त पार्न लगाउन पनि सक्नु हुन्छ ।
Prevसन्तान नभएर तनावमा हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् शास्त्रका यी उपाय
मनै लोभ्याउने मुना गौचनको बोल्ड अवतारमा रहेको ११ हट फोटोहरु